Dowladda Uganda oo beenisay inay Ciiddankooda kala baxayaan Hawlgalka AMISOM ee Somalia. – Radio Dalsan FM 91.5 MHz | Warar Sugan | Somalia News
Dowladda Uganda ayaa si kulul u beenisay wararka ay Warbaahinadda Bulshadda maalmahan ku sheegayaan inay Uganda la bixi doonto Kumanaanka Askari ee qeybta ka ah Hawlgalka Midowga Afrika ee Nabad-ilaalinta Somalia ee AMISOM.
Telefishinka NTV-Uganda ayaa baahiyey in Taliska Sare ee Ciiddanka Uganda oo uu Madaxweyne Yoweeri Museveni madax ka yahay ay muddo 2 isbuuc gudaheeda kaga soo saari doonaan Goaankooda ku aadan Dib-u-eegista ay ku hayaan Ciiddanka ka jooga AMISOM, 9 sanno kadib, Isku-day lagu doonayo in dib loogu soo celiyo Deganaanshaha iyo Nabadda Somalia.
Afhayeenka Ciiddanka Ugand,a Colonel Paddy Ankunda oo la hadlay Telefishinka NTV ayaa beeniyey inay Ciiddankooda kala soo bixi doonaan Somalia.
“Waan maqlayaa wararka lagu sheegayo in Ciiddanka Uganda ee UPDF laga soo saarayo Somalia, ma garanayo halka ay ka keeneen. Waxa aan haatan samaynayo ayaa ah inaan qiimeyn doono Hawlgalakasi oo socday muddo ku dhow 10-sanno, taasina micnaheeda ma aha in Ciiddanka Uganda laga soo wada saarayo Hawlgalka ka socda dalka Somalia. Waxaan u malaynayaa Warkaasi waa Borobogaando” ayuu yiri.
Mar wax laga weydiiyey inay Ciiddankaasi niyad-jab ka qaadeen Mushaar-dhimista lagu sameeyey, waxa uu yiri :- “Taasi haba yaraatee waxba u dhimayso Moraalkeenna. Waxay qaataan mushaar buuxa marka ay ku soo laabtaan dalkooda hooyo”
Go’aankii ay Dowladaha Midowga Europe ku jareen 20% Miisaaniyadda lagu taageeri jirey Hawlgalka AMISOM, ayaa waxa u usaamayn ku yeeshay Mushaarkii ay Askarta AMISOM qaadan jireen, iyadoo Ciiddanka Uganda aysan wax mushaar ah helin dhowrkii bilood ee la soo dhaafay.
Dhinaca kale, Taliska Sare ee Ciiddanka UPDF oo uu Madax ka yahay Madaxweynaha Uganda, Yoweeri Kaguta Museveni ayaa la filayaa inay Kulamo Xasaasi ah ka yeeshaan Masiirka Ciiddankooda qeybta ka ah Hawlgalka AMISOM iyo saamaynta ay keeni karto haddii ay Ciiddankooda kala soo baxaan Somalia iyo Khataraha ay Uganda iyo dalalka deriska ka filan karaan Xarakadda Alshabaab oo qorsheynayso inay weeraro cusub ku qaadaan Uganda.